Connector Equipment, Auto Connector, Car Connector, Aviation Connector - yc
Dongguan Yuechuang kushandisa michina Equipment Co. Ltd. (yc) yakavambwa muna 2007, ari yepamusorosoro zvebhizimisi kushandisa iri connector gungano muchina uye non-mureza gungano kushandisa michina michini uye midziyo R & D, magadzirirwo, kugadzira, Sales, kugadzwa, kuchinja , hwokugadzira mabasa muna rimwe, iri Road Yang Yang Science Park, Gate Five Min Chang Road, Humen Town Gate, DongGuan City, China.
Yue Chuang ndiyo motokari connector zvaitika gungano muchina bhizimisi, tine vapfumi experienceis anenge 10years ari R & D uye kugadzira maindasitiri, mune akangwara, vakarongeka uye akatsiga chigadzirwa pfungwa, vakaraira kudzora kurimwa quality, kupa munhu zvichienderana motokari connector gungano muchina kushandisa michina customized mhinduro kundosangana chaiko zvinodiwa kugadzirwa motokari connector, kuti dzibatsire vagadziri kuita connector kushandisa michina dzaFord ndiwedzere, rinorema remaoko, kwainoita kugadzirwa muitiro, chigadzirwa unhu kugadzikana, kuvandudza kugadzirwa kushanda, kuvandudza motokari connector manufacturers'production kunyatsoshanda uye makwikwi akaitwa ...
zvakwakanakira mana chigadzirwa
Makore 10 mweya nenyanzvi, vonyanya kugadzirwa uye anogadzira zvinhu motokari connector zvakazara zvoga gungano muchini
(1) Yue Chuang ane ruzivo injiniya kukura chikwata, kufunga tsvakurudzo, magadzirirwo, kugadzirwa uye rokutengesa ose connector kushandisa michina michina kwemakore 10.
Advanced ano, mukuru zvigadzirwa, kusika yokuisvonaka
Munhu zvichienderana Customization Solution
Kupa munhu zvichienderana kugadzirisa kuvandudza kugadzirwa kunyatsoshanda uye makwikwi
(1) Ipa customized negadziriso nomumwe motokari connector gungano michina kundosangana chaiko kugadzirwa zvinodiwa motokari connector gungano Enterprises
Kukupa mupfumi ruzivo uye chikwata yakura
Vatengi Japanese shanyira
Interplex California fekitari pakukurukura uye michina Exchange
Vatengi Russian shanyira
Interplex hwokugadzira chirimwa muna Rhode Island
Russian mutengi anoshanyira Yuechuang kuti zvemafoni Exchange
TDK kasitoma anoshanyira
Company nhau >>
80%! Domestic shure-the-nhoroondo gamba pamwe T-motokari - Gaopin kushandisa michina
Kufunga yose motokari kumusika, Turbo wedzera ari kuramba achiva choruzhinji muitiro. mhando dzose motokari takashongedzerwa ne "T".
Industry nhau >>
DSM anotangazve mutsva hydrolysis nemishonga PBT aine girazi internet zviri 30% kuti anogona aoma ...
Kwakavakirwa zvesainzi yeDutch Royal DSM Group, iri kushingaira muminda utano, zvokudya uye zvinhu pasi rose ...